Jilaaga Caanka ah ee Shah Rukh Khan oo Markii Labaad Lagu Xidhay Madaar Maraykanka ah | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Jilaaga Caanka ah ee Shah Rukh Khan oo Markii Labaad Lagu Xidhay Madaar Maraykanka ah
Jilaaga caanka ka ah shirkadda filimada metesha ee Bollywood Mr. Shah Rukh Khaan, ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in saraakiisah garoonka caalamiga ah ee Los Angeles ee dalka Maraykanku xidhaan. Ilaa hadda ma cadda sababta loo xidhay jilaagan caanka ah ee filimadiisa dunida laga jecel yahay iyo waliba inta daqiiqo ee uu madaarkaas ku xidhnaa, balse safiirka Maraykanka u fadhiya dalka Hindiya ayaa raaligelin ka bixiyey falka madaarka Los Angeles kula kacay Shah Rukh Khan, waxaannu sheegay in baadhitaan lagu samaynaayo arrintaa, mar dambena aanay dhici doono.
Sannadkii 2012, ayaa Shah Rukh Khan muddo 90 daqiiqo ah uu ku xidhnaa Madaarka White Plains ee magaalada New York, waxaana la sii daayey, kadib markii Safaarada Hindiya arrinkaas ka shaqaysay.
Jilaagan oo u duulay magaalada Los Angeles shalay ayaa boggiisa Tweeter ku soo qoray inuu ixtiraamaayo adkaynta ammaanka iyo sida caalamku u ilaashadu ammaankiisa, balse uu ka xun yahay in mar kasta la xidho dadka aan dambiga galabsan.
“Aad baan u fahansanahay, una ixtiraamaya ammaanka dunidu sida uu yahay, balse in Maraykanka Laantiisa socdaalka lagugu xidho mar walba dhab ahaantii aad baan uga xumahay,” ayuu boggiisa Twitter ku soo qoray Shah Rukh.
Waaxda Socdaalka Maraykanku arrintan kamay hadal, balse Nisha Biswal oo ah Kaaliyaha Maraykanka u qaabilsan Arrimaha Dibada iyo Bartamaha Eeshiya, ayaa hseegtay in ay ka xun tahay falkan lagula kacay jilaagacan caanka ah, arrintana ay la kulmaan mararka qaar dibloomaasiyiin Maraykan ah.